Onyeisiala 2023: Amaechi akatọọ El-Rufai, nye ndị Igbo ndụmọdụ | odumblog
Onyeisiala 2023: Amaechi akatọọ El-Rufai, nye ndị Igbo ndụmọdụ
posted on Aug. 17, 2019 at 10:23 am
Minista Republic nke izizi enwere na Naijiria, Chief Mbazulike Amaechi, akatọọla Gọvanọ nke steeti Kaduna, Nasir El-Rufai, na aro ya na Naịjirịa kwesịrị ịhapụ nhọpụta ogbe a chọrọ ime ndọrọndọrọ onyeisiala Naijira.
Mgbe ya na ndị Sun na-ekwu okwu, Amaechi kwuru na El-Rufai enweghị ikike ikwu okwu banyere Naịjirịa.
Onye okenye ahụ gwara ndị Igbo ka ha bịakwute ya maka ndụmọdụ,ma ọ bụrụ na ha chọrọ inweta ọkwa onyeisiala, dịka o “ji igodo ya”.
El-Rufai akọwaala nhọpụta ogbe a na-eme ọtụtụ ọkwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka ihe mgbochi nye ezi ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Mana Amaechi asaghachila ya sị, “Ihe El-Rufai na-ekwu enweghị isi ọ bụla. Onye bụ El-Rufai ikwu banyere Naịjirịa, ọ bụ naanị n’ihi na o meriri ndọrọndọrọ ọkwa gọvanọ; ọ bụ onye ebee?
N’ịchị ọchịchị, ị ga-emeri ya, ọ bụ ya mere m ji gwa ndị Igbo, na ọ bụrụ na ha chọrọ ịbụ onyeisiala, na ha ga-ahazi, ha kwesiri ịkọwa ihe ha ga-eme, atụmatụ ha ga-eji arụ ọrụ. Anaghị abụ onyeisiala naanị n’ịzube ịbụ otu.
“Onweghi onye ga-enye gị onyeisiala n’agbaghị mbọ ya; Ndị Igbo kwesiri inwe atụmatụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịbụ onyeisiala Naijiria, mana n’ihe ha na-ekwu ugbu a, ahụghị m ka ha na-akwado maka onyeisiala n’afọ 2023. Agwala m ha okwu banyere ya, nke ahụ bụ okwu ndị Igbo niile nọ n’ All Progressive Congress (APC), na Peoples Democratic Party (PDP).
“Ka ha bịakwute m ugbu a m ka dị ndụ, aga m agwa ha ihe ha kwesịrị ime iji merie ọkwa onyeisiala na 2023. Ọ dịghị onye ga-ekwenyere ya. Ọ bụrụ na ha achọghị ịbịakwute m, ka ha were ihe ọ bụla ha hụrụ. Azikiwe nyere m igodo ahụ awa ole na ole tupu ọ kwụsị iku ume, eji m ya bụ ụzọ; ọ bụrụ na ha chọrọ onyeisiala, ka ha bịakwute m, ọ bụrụ na ha achọghị, ha ahapụ, ihe ha hụrụ ha ewere. ”
Tags:2023AmaechiBBC Igbobbc newsBIAFRAbreaking newsBuhariChannelsEl-rufaiElectionFulaniFULANI HERDSMENIgboIgbo blogIgbo NewsLatest newsNdi IgboNigeriaNigerian PoliticsOdumblogOdumblog newsOhanaeze ndigboPoliticsPremium TimesPresidencySahara ReportersSenate
odumblog August 17, 2019
Aka ndị uweojii akparala ndị gburu ụkọchukwu Enugwu
Ndi IPOB wakporo m na Germany: Ekweremadu